Boorsada Boorsada Bacda Shiinaha ee aan biyuhu sahamin soosaarka iyo Warshad | Kinghow
Haddii aad xiise xoog leh u qabto safarka wadada / xeebta, dalxiisyada ama socodka maalinlaha ah, qaboojiyahaan boorsada ah ayaa ah lamaanahaaga ugu fiican dhammaan noocyada waxqabadyada bannaanka. Si loo hubiyo inaad dareento raaxada ugu dambeysa iyo qaadista, boorsada qaboojiyaha ayaa fiiro gaar ah u yeelatay xargaha garbaha oo duuban iyo dhabarka dambe ee boorsooyinka dahaaran. Isku-darka buuxa ee boorsada iyo qaboojiyaha, gacmahaaga sii daa markii aad buuxiso oo lagu daro qaboojiyaha boorsada ee dahaarka leh ayaa dhabarkaaga ka dhigaya mid fiican oo qabow. Qalabka qaboojiyaha bacda ku dahaadhan, waxaad maalinta macquulka ah la qaadan kartaa qoyskaaga, adigoo ku raaxeysanaya cabbitaanka xeebta ama doonta.
Astaamaha Boorsada Boorsada
JOOGTADA jilicsan ee JOOGTA: Ka samaysan walxaha TPU (Thermoplastic Polyurethane) oo adkeysi iyo adkeysi leh. Bey'ada-saaxiibtinimo TPU waxay leedahay xiisad aad u sareysa, xoog siligga sare, adag iyo gabowga u adkaysta, kaamil ka hortagga karka kaamil ah, iyo waxqabadka adag ee biyuhu.
DUGSIGA XULASHADA LEAKPROOF: The soft qabow boorsada boorsada waxay ka kooban tahay jiinyeer hawo-qaad leh iyo geedi socodka geedi-socodka daboolida oo dhan si loo hubiyo 100% leakproof. Waxyaabaha dahaadhka-cufnaanta-sare iyo shaashadda caddaynaysa in la sii daayo ayaa wada shaqeeya si ay cuntada u ahaadaan kuwo kulul / qabow ah muddo 3 maalmood ah (oo leh isku-darka barafka-ilaa-iyo-2)!
AQBARASHADA AWOODA BADAN: 13 ″ x 9.5 ″ x 22.5 ″ (L x W x H), Miisaanka: 5.7 lb, wuxuu ku hanan karaa ugu yaraan 30 gasacadood oo baraf leh, qiyaastii 20L, wuxuu leeyahay meel ku filan dhammaan cabbitaannada iyo cuntada maalintiiba.
BADAN IYO RAAXO LEH: 1 qolka weyn ee kaydinta qolka, 1 Top jiinyeer Pocket, 2 toosan jeebka mesh dhinac si ay u ilaaliyaan waxyaabaha qalalan iyo 1 biirka u fur on suunka. Suunka dhexda ayaa safarkaaga ka dhigi kara mid raaxo leh. Suunka hore iyo hoose ee boorsada qaboojiyaha ayaa kuugu habboon adiga bannaanka qalabka socodka.
BPA BILAASH: Khadadka qaboojiyeyaasha boorsada laga sameeyay ee tayada sare leh ee bilaashka ah ee 'BPA'. Qalab wehel ah oo qado ah, xeebta kaamayn dalxiis, baarkinka, gawaadhida dabada, socodka, kaamamaynta ama adeegsiga daarada dambe.
bacaha qaboojiyaha dahaaran
Bac jilicsan oo qabow
Qabanqaabiyaha Boorsada Xafaayadda Ilmaha
Boorsada Jirka Jirdhiska Jirdhiska